पोडकास्ट छ? एउटा माइक फ्ल्याग नबिर्सनुहोस्! | Martech Zone
पोडकास्ट छ? एउटा माइक फ्ल्याग नबिर्सनुहोस्!
मंगलवार, फेब्रुअरी 10, 2015 सोमबार, फेब्रुअरी 9, 2015 Douglas Karr
मेरो राम्रो भर्चुअल साथीहरू मध्ये एक जोशुआ डोर्किन, संस्थापक हो बिग पकेटहरू, घर जग्गा लगानीकर्ताहरूको लागि एक सामाजिक नेटवर्क। हिजो, यहोशूले आफ्नो नयाँको फेसबुकमा फोटो शेयर गरे माइक झण्डा.
धेरै पोडकास्टरहरूले भिडियोमा उनीहरूको कार्यक्रमहरू रेकर्ड गर्न भिडियो लिन्छन् वा भिडियो मार्फत लाइभ प्रसारण गर्दछ। किन समय लिने छैन र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सम्पूर्ण भिडियो सही रूपमा ब्रान्ड गरिएको छ? राख्दै माइक झण्डा तपाईंको माइक्रोफोनमा तपाईंको पोडकास्ट नाम र यूआरएल राम्रो विचार हो!
जोशुआले टोलीबाट आफ्नो माइक झण्डा किने प्रभाव पीबीएस, जसले मानिसहरूलाई तिनीहरूको माइक फ्ल्याग डिजाइन र अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूको उत्पादनहरू समावेश:
ह्यान्डहेल्ड माइक्रोफोनका लागि माइक फ्ल्यागहरू - कुनै पनि आकार वर्ग, आयत वा त्रिकोण mic झण्डा लगभग कुनै पनि आकार ह्यान्डहेल्ड माइक्रोफोन फिट गर्न।
रेडियो विशिष्ट माइक झण्डा - शैलीहरू EV309 सदमेय माउन्ट, Shure SM7s, र दुबै बूम र डेस्कटप माइक्रोफोन स्ट्यान्डहरूका लागि क्लिपहरूका लागि हाम्रो ईम्प्याक्ट स्टुडियो फ्ल्याग समावेश गर्दछ।
टावर्सका लागि माइक फ्ल्यागहरू - प्रभाव टावर चार चारै तिर १ on ″ x ″ full पूर्ण रंग प्रचार स्थान हो। कुनै पनि परम्परागत माइक स्टन्ड फिट गर्दछ।
खाली माइक फ्ल्यागहरू - प्रभाव PBS छ र colors र दुई शैली मा खाली माइक्रोफोन झण्डा प्रदान गर्दछ।
अन्य प्रोमोशनल सामानहरू - ब्यानर, डोरी, बम्पर स्टिकर र अधिक।
सदस्यता लिन युट्यूबमा BiggerPockets 'भिडियो र सदस्यता लिनुहोस् बिग पकेट्स रियल इस्टेट पोडकास्ट.
टैग: बिगपोकेट्सजोशुआ डोर्किनमाइक झण्डामाइक्रोफोन झण्डापोडकास्ट माइक झण्डाघर जग्गा लगानीघर जग्गा लगानीकर्ता
अनमेटरिक स्मार्ट डेटा उपकरणको साथ तपाईंको सोशल मीडिया प्रभाव बढावा
जोशुआ डोर्किन @ BiggerPocket.com
फेब्रुअरी १,, २०११ 10:१:2015 अपराह्न
साझेदारीको लागि धन्यवाद, डग! धेरै धेरै धन्यवाद!